Maaskaro wajiga oo ka hortaga bakteeriyada
Qeybta hoose ee 'Covid 19', dadku waxay u baahan yihiin inay naftooda ku ilaashadaan iyagoo xiranaya maaskaro wajiga iyo galoofyada. Habka ugu wax ku oolka ahi waa inuu ahaadaa maaskaro maaskaro. Waxaan sahaminay wajiga wajiga qalinka oo dili kara fayrasyada uu ku dhaco marinka neef mareenka, wuxuu iska caabin karaa 99.9% fayraska HIN1. Dr. JinJian Fa ...
3LTEX waxay kaqeybqaadatay A Plus A dhacdadii ugu weyneyd ee dhanka amaanka, amniga iyo caafimaadka shaqada
Sannad kasta, shirkadda 3ltex waxay ka qaybqaadan doontaa Shiinaha ugu weyn iyo bandhigyo caalami ah oo la xiriira teknolojiyada, amniga iyo caafimaadka. A + Bandhigga Ganacsiga Caalamiga ah ee lala yeesho Koongarasku waa dhacdada ugu ballaadhan berrinka Badbaadada, Amniga iyo Caafimaadka ee Wor ...
Sannad kasta, shirkadda 3ltex waxay ka qaybqaadan doontaa Shiinaha ugu weyn iyo bandhigyo caalami ah oo la xiriira teknolojiyada, amniga iyo caafimaadka. Techtextil hormuudka carwada ganacsiga caalamiga ah ee dharka farsamada iyo kuwa aan dharka lahayn, ayaa soo bandhigi doonta ...